Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Qabsoon Hidhannoo Malee (Nonviolent Resistance) Maaliif Nu Barbaachisa?
Qabsoon Hidhannoo Malee (Nonviolent Resistance) Maaliif Nu Barbaachisa?
(Ferhan Abdulselam irraa)
Mootummaan abbaa irree tokko lola malee nagayaan akka aangoo gadi hin dhiifne waan wal nama gaafachiisuu miti. Haa tahuu malee, mootummaa abbaa irree humna waraanaatiin cimee jiru tokko yoo humna waraanaa cimaa isaan gitu hin qabaanne, miidhaa isaa hir'isuuf karaan itti dura dhabbatan karaa qabsoo hidhannoo maleeti. Qabsoon hidhannoo malee kan hidhannoo irra, yeroo itti bu'a qabeessa ta'utu jira. Fakkeenyaaf, akka armaan olitti ibsuuf yaaletti, bakka waraana gita abbaa irree hin qabnetti, abbaa irreetti duula waraanaa banuun miidhaa guddaa qaba. Miidhaa kana hir'isuuf, humna abbaa irree kana tarsiimoolee qabsoo hidhannoo maleetti fayyadamanii hir'isuun barbaachisaadha.
Faayidaalee qabsoon hidhannoo malee qabu keessaa:
1) Namoota hedduu qabsootti hirmaachisa Qabsoo bilisummaaf godhamtu keessatti namni hundi qawwee qabatee loluu hin fedhu. Sababa adda addaatiin namni hedduun qabsoo waraanaa keessatti hin hirmaatu. Haa tahuu garuu, qabsoo hidhannoo malee keessatti ijoollee irraa eegalee hanga manguddootti hirmaachuu danda'u. Namni hunduu haala miidhaan guddaan irra hin geenyeen akka isaaf tolutti mootummaa abbaa irree irratti dhiibbaa godhuu waan barbaaduuf, namni hedduun irratti hirmaachuu danda'a. Gama biraatiin, yeroo mootummaan abbaa irree tarkaanfii adda addaa ummata iratti fudhatu, ummata keessatti xiiqii uumee daran ummanni gara qabsootti akka makamu godhuun namoota hedduu hirmaachisuu danda'a.
2) Mootummaa abbaa irree saaxilee akka addunyaan hin gargaarre godha Waraanni tokko akka Wayyaaneetti ummata irratti kallattiin yoo dhukaasa banee, daa'imaa hanga manguddootti kan ajjeesu tahe, gochi isaa addunyaatti saaxilamee gargaarsa akka dhabu godha. Kuni ammoo abbaa irree san akka inni diinagdeen cimee waraanallee hin jabeeffanne godha.
3) Humna waraanaa abbaa irree jalaa laaffisa
Mootummaan abbaa irree ummata sodaachisee bulchuu waan barbaaduuf, waraana ummatatti bobbaasa. Waraanni kun yeroo bobba'u diinagdee hedduu waan itti dhangalaasuuf kasaaraa guddaa irraan gaha. Gama biraatiin, waraanni tokko yeroo ummata nagayaa ajjeesu, hamilee gaarii hin qabaatu. Haalli kun bubbulee akka waraanni harkaa faca'u godhuutu mala.
Qabsoo hidhannoo fi hidhannoo malee wal bira qabnee yoo ilaalle, hanga ammaatti qabsoo hidhannoo malee godhamaa jirtu kana irratti lubbuun ilmaan Oromoo wareegamte kan ji'oota saglan dabartee yoo shallagne 1000 oli. Garuu wareega isaan godhan irraa bu'aan argamte waan himnee fixuu dandeenyuu miti. Osoo qabsoo hidhannootiin ta'ee, lubbuun namoota 1000 ol bahee injifannoo hangana gahu galmeessuu dhabuu danda'a. Osoo ni galmeessa jennee, bara 1992 irraa kaasee ilmaan Oromoo lola keessatti sirna Wayyaaneetiin galaafataman kumaatamatti lakkaa'amu jedheen amana.
HUB: Yeroon kana jedhu, qabsoon karaa hidhannoo hin barbaachiftu jechuu kiyyaa miti. Baay'ee baay'ee barbaachisa. Namoota qabsoon hanga ammaa godhamaa jiru bu'aa buusaa hin jiru jedhanii fi gara abdii kutannaatti deemaa jiraniif yaadachiisa akka tahu qofaaf malee, qabsoo karaa hidhannootti amanuu dhabeetii miti.
Posted by Hasan Ismail at 3:55 PM